Xildhibaanno weydiiyey Wasaaradda Maaliyadda sababta ay ciidanka ugu kordhin weysay mushaarka – Kalfadhi
Xildhibaanno weydiiyey Wasaaradda Maaliyadda sababta ay ciidanka ugu kordhin weysay mushaarka
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa weydiiyey Wasaaradda Maaliyadda sababta ay u bixin weysay 50 Doolar oo uu Baarlamaanka Soomaaliya u ansixiyey Ciidanka Soomaaliya in loogu kordhiyo mushaarkoodii hore. Xildhibaan Warsame Maxamed Joodax ayaa sheegay in ay tahay cadaalad darro in ciidanka, isaga oo jooga aagag dagaal, uu waayo mushaar uu u kordhiyey Baarlamaanka, sida uu hadalka u dhigay.
“Dhaqaalihii horay loogu daray ciidanka, sida 50-kii Doolar ee Golaha Shacabka ogolaaday, waxaan aragnaa in aan la bixin, waxa ayna ku dhintaan qarax iyo dagaal maalin kasta” ayuu yiri Xildhibaan Warsame Joodax. Waxa uu soojeediyey in lacagtaas loo bilaabo ciidanka marka la ansixiyo Miisaaniyadda 2019-ka. “Waa in lacagtaas la bixiyaa” ayuu yiri Xildhibaan Joodax.
Xildhibaan Haashim ayaa isaguna isweydiiyey in lacagta uu Goluhu u kordhiyey ciidanka mar hore ay ku jiraan kuwa ka faa’iideysanaya Ciidanka Asluubta Soomaaliya. “Waxaa ku jirta miisaaniyadda in 50 doolar lagu kordhiyo mushaarka ciidanka. Marka, maku jiraan Ciidanka Asluubta, oo aan ognahay in Dable ilaa Darajada Sare ay wadda qaataan mushaar ahaan 100 doollar?” ayuu Haashim weydiiyey Wasaaradda Maaliyadda, oo maanta hor joogtay Golaha Shacabka.
Wasiirka Wasaaraddaas Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa, isaga oo ka jawaabaya weydiimaha Xildhibaannada, ka hadlay Mushaarka Ciidanka Soomaaliya, waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Goluhu u doodayo ciidanka. “Waan isla qabnaa in ciidanka lacagtooda la kordhiyo, laakiin ciidanka waxaa ku jira mad-madow” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beyle.
Waxa uu sheegay in mushaarka ay dowladdu siiso ciidanka aysan ku saleyn nuuca iyo qeybaha ciidanka ee ay si isku mid ah oo guud u wada siiso. Beyle waxa uu sheegay iney ciidanka ku wadaan shaqo ay ku kala saarayaan. “Ciidanka waxaan ku wadnaa shaqo, waxa aynu soo dhamaystiraynaa dhawaan” ayuu yiri Wasiir Beyle. “Laakiin waxa ay bil kasta helaan lacagtooda 100-ka ah, waxaana idiin sheegayaa in aanan kala saarin oo aan lacagta u siino si dhamastiran” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Kulanka 31-aad ee Golaha Shacabka oo maanta looga dooday Miisaaniyadda 2019-ka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay inuu Goluhu ka digtoon yahay khilaaf kale